Hogaamiyaha Cusub Ee Daacish Ma ahan Bani’aadam! | Xaqiiqonews
Hogaamiyaha Cusub Ee Daacish Ma ahan Bani’aadam!
Wargeyska caanka ah ee Biritan ka soo baxa “Daily Mail” ayaa warbixin cusub ka sameeyey hogaamiyaha cusub ee Kooxda.
Kooxda Dowladda Islaamiga ayaa baahisay magaca nin ay ku magacaabeen “Abuu Ibraahim Al Haashimi” kaasi oo badalay hogaamiyii geeriyooday Sheekh Abuubakar al-Baqdaadi”.
Sida Xaqiiqonews ay ka soo xigatay Daily Mail, ma jirto cid xaqiijisay waa Kee Abu ibraahim, taasi oo wargeyska uu ku tilmaamay in ay tahay horumar kooxda ay ka sameysay istiraatiijiyahoodii “is qarinta”.
Qof la hadlay Wargeyska ayaa yiri “Wax badan kama naqaano ninkani aanka aheyn in uu qaadi ka ahaa maxkmadda shareecada islaamiga” hase yeeshee wargeyska ayaa sheegay in uu jiro shaki baahsan oo ku saabsan sax ahaanshaha in uu jiraba ninkani.
Sidoo Kale Aqri.. Waa Kee Hogaamiyihii Daacish ee Geeriyooday?
Dadka qaar ayaa ku doodaya in kooxda ay dib u magacowday magacii horee al-baqdaadi “Ibraahim alhaashimi” si kooxda ay u muujiso in ay ka jawaabeyso wixii dhacay.
Jean-Pierre Filiu oo ku takhasusay arimaha carabta iyo islaamka ayaa sheegay in kooxda ay magacawday “nin aan jirin” ka dib markii ay kadis ku noqtay sida fudud ee loo dilay Al-baqdaadi.